Ururka ECPAT & Wasiirka Socdaalka Billström | Somaliska
Ururka ECPAT oo ah urur la dagaalama ka ganacsiga caruurta ayaa cambaareeyay Wasiirka Socdaalka Sweden Tobias Billström ka dib markii uu hada ka hor dhowr jeer ku dooday in caruurta iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee laysku diiday looga gol'leeyahay sidii looga hortagi lahaa ka ganacsiga caruurta. "Qaabka ugu fiican ee looga hortagi karo ka ganacsiga caruurta waxay tahay in lala mideeyo waalidkooda" ayuu yiri Lars Arrhenius oo ah gudoomiyaha ECPAT isagoo ula jeeda in wasiirka hadalkiisa uusan xaqiiqada ku dhisneyn. Wariyaha telefishinka TV4 Lena Sundström oo si fiican u dabagasha arimahaan ayaa hada ka hor wareysi ay ka qaaday wasiirka si weyn ugu adkeysay in uu cadeeyo sababta ka dambeysa diidmaha isagoo wasiirka ku celceliyay in laga hortagayo ka ganacsiga dadka qaasatan caruurta. Lena Sundström ayaa ku dilmaantay aragtida wasiirka mid aan la fahmi karin.
Ururka ECPAT oo ah urur la dagaalama ka ganacsiga caruurta ayaa cambaareeyay Wasiirka Socdaalka Sweden Tobias Billström ka dib markii uu hada ka hor dhowr jeer ku dooday in caruurta iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee laysku diiday looga gol’leeyahay sidii looga hortagi lahaa ka ganacsiga caruurta.
“Qaabka ugu fiican ee looga hortagi karo ka ganacsiga caruurta waxay tahay in lala mideeyo waalidkooda” ayuu yiri Lars Arrhenius oo ah gudoomiyaha ECPAT isagoo ula jeeda in wasiirka hadalkiisa uusan xaqiiqada ku dhisneyn.
Wariyaha telefishinka TV4 Lena Sundström oo si fiican u dabagasha arimahaan ayaa hada ka hor wareysi ay ka qaaday wasiirka si weyn ugu adkeysay in uu cadeeyo sababta ka dambeysa diidmaha isagoo wasiirka ku celceliyay in laga hortagayo ka ganacsiga dadka qaasatan caruurta.
Lena Sundström ayaa ku dilmaantay aragtida wasiirka mid aan la fahmi karin.
Ururka ECPAT haduu yiri qaabka ugu fiican ee looga hortagi karo caruuraha la gato waa in lala mideeyaa waalidiintooda waxeey dowladda sweden noogu sii dhaganaato ma jiraan mana soconayso ilmaa la iibsadaa iyo marmarsiyahaas wariye Lena sundström wey ka daba geysey wasiirkii walahi ma aqaan waxaan ugu abaalgudo gabadhan saxafiyada ah runtii dadaal aan la iloobi karin ayeey u galeysaa arinteena
Dadyahow ma sheegi la’dihiin sababta walidiinta & caruurtooda la isugu diidanyahay ee dhabta ah??! Jimcaale thanks wlhi sida aad adiguba u dadaaleyso ogowne qof walbo oo wax sameeya caqabad weey ka hor timaada
waa lugu dhagnaana sweden adiga miyaa leh salmo
ASC ilahey ha inoogu sooqado marmarsiyo aan soconeen bey sweden wadanee ,,,yusuf wax hubso salmo hadalkeda dib uraaac oo siwacan u aqri cakuye somalida qar iyo seefla bood jimcale thxx sida wacan aad inoogula dadalesaaan
gabdhaas waryada ah waxaan ugu abaal gudi karaa in aan gursado si kale malahan salmo
sveriga waxay sheegataa in ay tahay wadamada dhowra xuquqda adanaha lakin waxay naqatay kuwa ku tunta xuquqda hadii ay caruur iyo walidkod kala ilaalisay caruurtii ay meel ku dhibahantahay walidkina fikir iyo istress meeshan ku hayso sharciga ay siisay qofkaas sveriga ilmihisii iyo asagana lakala ilaaliyay ma faaidaa mise waa qasaaro?
ASC dhamaantina inte lagu sheegay waliid ilmihisa ibinayo somaliyo waxaay cunaan lo heynin ayaa lagu korinaye iskaba dhafe swedan oo lacaag lagugu sinayo lakiin qaladki hore ey somalida sameyen ayaa laga guda lakiin wey iska dhamaneyn
asc. walaal JIMCALE waxaan aad kugu mahad celinayaa sida aad ula shaqeeyso soomalida. Runtii xitaa waxaa dhaco mar marka qaarkood in lagu af lagaadeeyo si aan malin hore ka arkaayay meesha, marka samir hana ka daalin u shaqeeynta uma daada. thanks
soomaalida waxaa tan heysato iyadaa usugu wacan waa run caruur iyo xaas ba wayka ganacsadeen waana lawada og yahay gaalada dabaal ayaad u malaysiin lkn idinka dabaaliin ah wadankii waxa ka jira bal arga meel kasta waalaga nacay faa,iido malahan soomalida wax barasho malahan shaqo malahan haday hadlaan been ayay ku hadlaan cayr in ay qaadaan oo ay been sheekaan ayay isku wada raceen
waxaan salaamayaa dhamaan ista raacday dariiqii rasuulka iyo sunihiisa ,
Salan ka bacdi , WAXAAN FAHMI WAAYEY SOMALISKA WARARKAAN MESHAAY KA KEENAAN WAAYO MA ARAG Ururka ECPAT & Wasiirka Socdaalka Billström , MEEL AAY HADALO ISKU WAYDAARSADEEEN , WEBSITE kasta waan ka eegay XATAA LOCAL_ka Sweden oo dhan …
faqalad diiid says:
ASC dhamaantiin waxaa la yaab leh ninka wata ayaanle walal ha ku mashquulin somaliska.com anigu waxaan joogaa addisabbaba magacayguna waa mukhtaar swedena waxaan ka soo tagay 5 may da,daydana 43 jirr telk waa 00251913263235 imyaas ka dib markasta waxaan aqristaa somaliska.com dadkinin canbareynaya iska daaya wixii somali dilay oo tagara kiinii bulshada wax tar u leh oo niyada ha ka jabinina wayo kaliya dad badan ayaa ka cun dadaalka uu sameeyay nin kaliya in aad ku gafteen waxaan ku cadaynayaa aniga ciyaalkayga ayaa iiga soo sheegay sweden anigoo jooga addis ka dibna waxaan ka daawada webbka tv4.se adiguna waad ka heli kari lahayd mida kale halkaan ayaadba ka arkaysaye wareysigaan ee ma waxaad leedahay midna waa tv4 jimcaale war ilaah ka baqa oo wax isku qurra tan kale dadka la midka ah ayanle oo kale iyo ayaanlaba waxaa idiin wacan kol hadii aadnan bulshada wax tarayn in aadnan ka wax taraya aadnan niyada ka jabin jimcaale iyo raga la shaqeeyaba waxaan idin leeyahay dadka qaarkiis ha ku habsaaminina
SXB Ayaanle waxa aw dhahay warkaan meesha laga soo xigtay hanalo shego si aan u hubsano maxaayeelay waxaa macquul ah inaw u dhuun daloolo tvga,wargeska iwm. Marki nuxurka Ayaanle la,abaaro waasaas su,aasha aw qabo asiga kaliyana ma,ahin anaa laqabo qaasatan warki kabaxay 4-ta maj ee ahay in NB-ga Sweden aw diiday arimihi soogalotiga. Waxaan isku dayay tv,iska dhaafe inaaan dad siyaasada kujuro aqbaar kahelo si aan wax uga hogaadho waxeeyna i dhehen waxaa ladiiday waxaa waaye in laga doodo arintaan maahee lama diidin ogolaasho ama kamasoo bixin jawaab kusaabsan nej,ja. Hadii wax ladiido waxa lasoo celi karaa doodaaas oo kale ugu yaraan 6,bil ama sanad ugu yaraan lkn hadii la dhahay kama doodi karno biriga ama waqti uma heeyno waxaa macquul ah in laga doodo foogta,, ama tii xigto iwm lkn waka raja fiicantahay 100% diidmo cadd. Markan saas lehay kama wado yacani in Jimcale waxa ay latahay aw iska qoro ama aw hurdisiiyo bulshada lkn kaliya waxaan rabaa inana ogaano cidi su,aal kaqabtaan laga qanciyo arimaha nuucas oo kale ah. Ayaane sxb adigana wixi aan bulshada wax u dhimeyn ha.naqdaan su,aalahaaaga asc
wararka arimaha sweden iyo somalida kusaab san waxan ka aqista somaliska.com hadi aad dhahdeen warka laguma kalsonan karo xage kalo war ka ka xaqiijinaa sxb wcs
Ayaanle iyo Massago – waxkale oo laga doodo maa lawaayay marka laga doodayo halka aan warkaan ka keenay? warkaan meesha uu ka yimid waata kor ku xusan video ayaa ku jira. waxaa laga soo daayay TV4 habeenkii axada.
Mida kale anaga war iskama abuurno, waan ka degdegbadanahay websiteyada kale waa midaas sababta aad wararkeena aadan meelkale uga heleyn balse ilaa hada lama haayo war Somaliska.com uu qoray oo been ahaaday. Ugu dambeyntii xaq ayaad u leedihiin in aad weydiisaan goobta laga keenay warka balse kan oo kale ma ahan, waayo Video ayaa la socda cadeynaya halka uu ka yimid.
jimcaaloow halkaada ka sii raro orwrkaada rag ku riixiya hadii aad aragtana ratti kale ayaa loo sii rartaa rabtii reysku yaalana waa loo si riyaaqaa ee rabow ku nabad gali bulsho dhanaa ku raratee oo warkeeda riixdaa. warhoow ina dadow ninkan dadaalaya ka daaya dibin daabyada iyo daba socoshada aan daliilka wadin